warkii.com » “Guusha LaLiga Ayaa Iiga Farxad Badan Koobabkii Champions League Ee Aan Kusoo Guuleystay”
“Guusha LaLiga Ayaa Iiga Farxad Badan Koobabkii Champions League Ee Aan Kusoo Guuleystay”
Zinedine Zidane waxa uu qarsan kari waayey sida uu ugu faraxsan yahay hanashada horyaalka waddanka Spain ee LaLiga Santander, kaddib markii ay ka adkaadeen Villarreal.
Tababaraha reer France ayaa markii uu horyaalku bilaabmayay xagaagii hore, waxa uu sheegay in bartilmaameedkiisu uu yahay inay horyaalka ku guuleystaan, halkii ay ka raadin lahaayeen Champions League oo sannadihiisii hore uu si joogto ah ugu guuleysanayay.
Markii ay koobka gacanta ku dhigeen, waxa farxadda la hor tegay warbaahinta oo uu u sheegay sida uu dareenkiisu yahay, iyo in farxadda uu ka helay hanashada LaLiga ay ka badan tahay xataa saddexdii mar ee uu ku guuleystay Champions League, waxaanu yidhi: “Waa dareen aad u weyn, maxaa yeelay wixii ay sameeyeen ciyaartoydu wuxuu ahaa wax cajiib ah.
“Ma garanayo ereyo aan ku cabbiro waxa aan dareemayo.
“Champions League waa Champions League, laakiin koobka horyaalka ayaa isiiyey farxad kasii badan, sababtoo ah LaLiga waa mid cajiib ah.”
Zinedine Zidane waxa uu amaan u jeediyey ciyaartoyda kooxdiisa, waxaanu yidhi: “Waxaanu ahayn kooxda ugu wanaagsan, sababtoo ah waxaanu helnay dhibcaha ugu badan. Aniga ahaan, waxay ii tahay mid ka mid ah maalmahaygii ugu farxadda badnaa intii aan xirfadda ku jiray.
“Ciyaartoyda ayay ahaayeen kuwii dagaallamay. Waa run inaan doorkayga lahaa, laakiin iyaga ayay ahaayeen kuwa aaminay. Waa koox leh dhaqan cajiib ah, marka aan arko iyaga oo faraxsanna, waxaan kasii helaa farxad. Xataa kuwa inta yar ciyaaray ayay ka go’nayd inay wax ku guuleystaan.”
Ciyaartoyda Real Madrid waxay ku dhax dabbaal-dageen garoonka Estadio Alfredo Di Stefano oo madhan, koobkana lagu guddoonsiiyey, waxaanu Zidane qirtay inay ahayd xaalad kakan maadaama aanay taageereyaal joogin, waxaanu yidhi: “Qof walba layaab ayay ku ahayd. Waxaanu jeclaan lahayn inaanu taageereyaashayada ku haysano Cibeles, laakiin ma karayno.
“Waxaan hubaa (taageereyaashu) inay guryahooda ku faraxsan yihiin, ayna ku faraxsan yihiin inay guryahooda ku daawadaan guusha kooxda, annaguna iyaga dartood ayaanu u guuleysanay.”